Olee otú ọsọ Up ekwentị gị
Nta ọ bụla smart ekwentị onye ọrụ chere ihu ọsọ yiri mbipụta na-ala otu n'ime ọ bụla ọnwa isii. Ụfọdụ smart igwe-aghọ onye na-adịghị, mgbe ụfọdụ n'ime ha na-amalite kefriza. Ka na-anya na atọ ndị kasị nkịtị mere na ike ịkụda gị iOS ma ọ bụ Android ekwentị.
1> nnọọ obere ohere nchekwa
Ọ bụrụ na ị na-aghọta na ekwentị gị na-arụ ọrụ nwayọọ nwayọọ, nzọụkwụ mbụ nke ị ga-ewere bụ ịlele ego nke esịtidem ebe nchekwa na ohere hapụrụ na SD kaadị. Ọtụtụ ngwa akwụsịlata mgbe ọ bụla ekwentị ebe nchekwa esịmde ụfọdụ ịgba. Jide n'aka na a na-ala, 30 percent nke mkpokọta ebe nchekwa bụ free na maka ojiji.
2> mgbe nile na-agba ọsọ ngwa
E nwere ọtụtụ ngwa na-anọgide na-agba ọsọ na ndabere ọbụna mgbe ị na-adịghị eji ha. Ndị a ngwa ọdịnala ike a otutu cache, na-eji bukwanu akụkụ nke ekwentị na ebe nchekwa. Na-iji lelee ma ọ bụrụ na ekwentị gị na-arụ ọrụ ngwa ngwa n'ihi na mgbe niile na-agba ọsọ ngwa, ị kwesịrị ị na Malitegharịa ekwentị gị na ekwentị, na mgbe ahụ gaa Ntọala> Ngwa> na-agba ọsọ ngwa ka ego na-akwado banyere ọnụ ọgụgụ nke na-agba ọsọ ngwa.
3> Ngwa njikọ Ịntanetị
Nke a nwere ike ụda weird, ma ọbụna onye na-adịghị internet ma ọ bụ Wi-Fi njikọ nwere ike slowdown ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba PC. Ya mere, ego niile na-agba ọsọ ngwa, ego nnweta ebe nchekwa, na ego gị njikọ Ịntanetị ọsọ dị ka mma.
Ụzọ ka mma gị ịrụ ọrụ ekwentị na mkpokọta ọsọ
Hichapụ achọghị ngwa
Ihichapụ achọghị ngwa ọdịnala na enyemaka nke ngwa nhichapụ software pụrụ inyere gị aka ike otutu ohere maka ọhụrụ ngwa, na ọ ga-adị na-elu-ekwentị gị.
Gbanwee ekwentị mkpanaaka gị netwọk
Ọ bụrụ na ị ghọtara na e nwere ụfọdụ nsogbu na ekwentị gị na netwọk, ma ọ bụ internet Njikọta bụ ngwa ngwa n'ihi na ndị ogbenye mkpuchi netwọk, i kwesịrị ịgbanwe ekwentị mkpanaaka gị na netwọk. Na-ahọrọ ọrụ na awade ezi mkpuchi gburugburu gị obibi na ụlọ ọrụ ebe.
Wụnye ngwa na nwere ike ihicha ekwentị gị
Wụnye ngwa na ike ihichapụ cache faịlụ, achọghị junk faịlụ, achọghị ngwa, na-akwụsị na ndabere ngwa site na-agba ọsọ.
Ime mgbanwe na gị rawụta n'ihi na mma Wi-Fi mgbaàmà
Wi-Fi ọsọ pụrụ imetụta gị ịrụ ọrụ ekwentị ukwu. Nwalee internet ọsọ na-eru gị rawụta, mgbe ahụ, ego ọsọ na ị na-n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ gị.
Ọ bụ ihe amamihe idozi gị rawụta na etiti nke ụlọ ya ka mgbaàmà ga-eru niile nkuku nke ebe. Ọ bụrụ na ruru ụfọdụ ihe ị na-adịghị ike ịgbanwe rawụta ọnọdụ, ị kwesịrị ị na-eche banyere ịzụ na mpụga poolu iji jide n'aka na gị smart ekwentị / mbadamba PC na-enweta ike mgbaàmà n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Wondershare MobileGo pụrụ ọsọ-elu gị iOS na gam akporo ngwaọrụ nanị otu click
The mkpa nke hour bụ a software omume na ike ịhazi smart ekwentị ọdịnaya, ịchọpụta enweghị isi faịlụ, ịchọpụta ngwa na-bi a otutu ohere, na aka na-ihichapụ achọghị data n'ime sekọnd.
Wondershare MobileGo awade nnọọ otú ahụ! Ngwa-enyocha kwa, na-achọpụta rụọ achọghị faịlụ na-enye ohere ọrụ ka ihichapụ ndị faịlụ na dị nnọọ otu Pịa. Nke a na-akpaghị aka na-enwekwu ekwentị gị ọsọ. Ọtụtụ ihe, MobileGo nwere ike jikọọ gị smart ekwentị na mbadamba PC gị na kọmputa na desktọọpụ. E wezụga na-eke azụ-elu maka ngwaọrụ gị data na kọmputa gị, ọ pụkwara ihichapụ / ihichapu data site na ngwaọrụ gị dị ka agha ụkpụrụ.
Jiri Wondershare MobileGo na adị-elu gị iOS ngwaọrụ
Nzọụkwụ mbụ bụ iji wụnye MobileGo ngwa na kọmputa gị.
Mgbe ahụ, jikọọ gị iOS ngwaọrụ na kọmputa na eriri USB. Họrọ ngwaọrụ ụdị dị ka iOS.
The software ga ịchọpụta ngwaọrụ gị na-egosi ya nkọwa na interface. Ọ ga-egosipụta niile ọdịnaya site na ngwaọrụ gị na edere. Wondershare MobileGo-eme ihe na iTunes ike. Ọcha ekwentị gị na iji tufuo nke na-achọghị junk faịlụ, họrọ ibu ngwá ọrụ kit nhọrọ si menu, na pịa ohere nchekwa.
Wondershare MobileGo si ohere nchekwa nhọrọ maka iOS ngwaọrụ-enye gị ohere ịchọta na ihichapụ junk faịlụ. Ọ na-enye gị ohere iji mpikota onu, ma belata size nke ihe oyiyi weghaara ngwaọrụ gị na-enweghị impacting ya mma.
Space nchekwa nwekwara achọpụta rụọ obere Mmanu ngwa, na-egosi na ndepụta na onye ọrụ interface. Ị nwere ike ihichapụ ndị a ngwa ọdịnala na dị nnọọ otu Pịa.
E wezụga nke a, ngwa awade fọrọ nke nta niile ọzọ data management na data ebufe atụmatụ na-awa site iTunes.
Jiri Wondershare MobileGo ngwa na adị-elu gị Android ekwentị
Nzọụkwụ mbụ bụ iji wụnye MobileGo ngwa na gị android ngwaọrụ.
Pịa na MobileGo icon na-emeghe ngwa.
MobileGo ga ngwa ngwa ike iṅomi ngwaọrụ gị na òkè nkọwa banyere pasent nke Ram ojiji, na dị nhọrọ na adị-elu ngwaọrụ gị.
Pịa na ekwentị Cleaner, na software ga-egosipụta ihe ọmụma banyere niile kwere omume na-achọghị faịlụ na ị nwere ike ihichapụ mma gị na ngwaọrụ ịrụ ọrụ.
All na ị chọrọ ime bụ pịa ọcha tufuo niile na-achọghị faịlụ.
The ngwa nakwa awade ọmụma banyere ejibeghi ngwa site na ngwaọrụ gị na i nwere ike na-eche banyere ihichapụ-eme ka ụfọdụ ndị ọzọ ohere.
The ngwa agbam ume nhọrọ awade ọcha ụfọdụ faịlụ site na ngwa na-eme ka ha na-arụkwa ngwa ngwa na mma.
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka HTC
> Resource> Android> Olee na adị na ekwentị gị